कतारमा पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य सहित ४ पत्रकार पक्राउ – MeroJilla.com
कतारमा पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य सहित ४ पत्रकार पक्राउ
काठमाडौं २९ पौष । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य लगायत ४ जना पत्रकारलाई कतारमा त्यहाँको सीआइडीले सोधपुछका लागि भन्दै समातेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, कतार शाखाको छैठौं अधिवेशनामा प्रमुख अतिथि तथा अतिथिका रुपमा सहभागि हुन गएका अध्यक्ष आचार्य लगायतलाई त्यहाँको सीआइडीले समातेको हो ।
समातिनेमा नेपालबाट गएका महासंघका अध्यक्ष आचार्य, प्रेस काउन्सीलका सदस्य एवं महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष खिलबहादुर भण्डारी, महासचिव रमेश विष्ट छन् । यसैगरी महासंघ, कतार शाखाका अध्यक्ष गणेश बञ्जाडेलाई पनि सीआइडीले समातेको छ ।
दिउँसो १ बजे सुरु भएको अधिवेशन चलिरहेको वखत कार्यक्रमस्थलबाट नै उनीहरुलाई करिव ३ बजेतिर पक्राउ गरिएको हो । उनीहरुको रिहाईका लागि कतारस्थीत नेपाली दूतावासले पहल गरिरहेको जनाइएको छ ।
प्रहरी मृत्युको हल्ला फैलाएर सरकारले डा. केसीलाई झुक्यायो	Thursday, July 19th, 2018
डा. गोविन्द केसी काठमाडौं आए	Thursday, July 19th, 2018
जुम्लामा डा. केसीका समर्थकअस्पतालमै पिटीए	Thursday, July 19th, 2018